“Nosamborina” tany Teheran ilay bilaogera Iraniana Hossein Derakhshan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Deutsch, English
Araka ny tranonkala Jahan News, nosamborina tao Tehran ilay bilaogera Iraniana, Hossein Derakhshan (fantatra amin'ny anarana hoe Hoder), bilaogera mavitrika izay nolazaina matetika ho rain'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana. Niverina tany Iran i Hossein tokony ho 3 herinandro lasa izay (Novambra 2008) ary nohadihadiana satria noahiahiana ho nanao fitsikilovana ho an'ny fanjakana Isiraely. Araka io loharanom-baovao io ihany dia toa niaiky i Hossein fa nandray anjara tamin'ny hetsika fitsikilovana ho an'i Isiraely. Tamin'ny volana Janoary 2006, nitsidika an'i Isiraely tamin'ny zom-pirenena Kanadiana i Hossein ary nibilaogy am-pahibemaso momba ny diany toy ny hoe fandravana ny fady lehibe :
Mety midika izany fa tsy ho afaka hiverina any Iran mandritra ny fotoana maharitra aho, satria tsy mankatoa an'i Isiraely i Iran, ary tsy manana fifandraisana ara-diplaomatika aminy, ary toa heveriny fa tsy ara-dalàna ny fandehanana any. Tena ratsy izany kanefa tsy miraharaha aho. Soa ihany, fa mizaka ny zom-pirenena Kanadiana aho ary manan-jo hitsidika ny firenena izay tiako. Nankany Israely aho amin'ny maha olom-pirenena mpanao gazety ahy sady mpikatroky ny fandriampahalemana.
Tamin'ny fotoana nanoratana dia tsy mbola nisy ny fanamafisana ny fisamborana an'i Hoder avy amin'ny loharanom-baovao hafa